ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -31 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -30
ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32 →
(ဂ) ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပါ။
ယောဂီတစ်ဦး၏ အလုပ်သည် ကိလေသာ လျော့ပါးစေရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကိလေသာ တိုးပွားစေရေး အမှုကို မပြုမလုပ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကိလေသာလျှော့ပါးစေလျက် လူအထင်သေးခံရမည့် လုပ်ငန်းနှင့် ကိလေသာ တိုးချဲ့စေလျှက် လူအထင်ကြီးခံရမည့် လုပ်ငန်းနှစ်ခုကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ရမည် ဆိုပါလျှင် လူအထင်သေးလျှင် သေးပါစေ၊ ကိလေသာ လျော့ပါးရေးသည်သာ အဓိကဖြစ်၍ ထိုလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
တရားအားထုတ်သောအခါ လူအထင်သေးခံရခြင်း အထင်ကြီးခံရခြင်းမှအစ အကြားအမြင် ပေါက်မြောက်လာခြင်း အဆုံးအထိ လောကဓံများ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်လာရတတ်သည်။ ကြားခြင်း မြင်ခြင်း ဆိုသည်မှာလည်း အနိစ္စတရားများသာဟု နှလုံးသွင်းကာ ကိလေသာလျော့ပါးရေး အကျင့်ဖြစ်သော ရုပ်နာမ်အပေါ် လက္ခဏာရေးတင်ခြင်း ဆင်ခြင်ခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နေရမည်။
လမ်းချော်၍ လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို လက်လွတ်ကာ အကြားအမြင်ဘက်သို့ တဘက်သတ် မလိုက်ရချေ။ အရာရာကို အနိစ္စလက်နက်ဖြင့် စစ်တမ်းထုတ်ရမည်။ စစ်တမ်းထုတ်ပုံမှာ အော် . . . ဤအရာများသည် မမြဲသော သဘောကို ဆောင်သည့် ဒုက္ခတရားတွေပါတကား။ အနိစ္စတရားများပါတကားဟု ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရမည်။
ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်မျိုးကို တိုက်ဆိုင်ကြုံကြိုက်ရသည်ဖြစ်ပါစေ `အော် – ဤဖြစ်ရပ် ဤအခန်းကဏ္ဍသည် ဤကဲ့သို့သော သဘောကိုဆောင်ပါတကား´ ဟုနှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ရမည်။ ဤသို့ တရားသဘောတစ်ခုတည်းကို ဆင်ခြင်နေခြင်းသည်သာ ယောဂီတို့၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
တရားရှာ ခန္ဓာမှာ ရှိသည်ဆိုသကဲ့သို့ မိမိခန္ဓာထဲ၌သာ တရားကို ရှာဖွေရမည်။ မိမိခန္ဓာသည် ချိန်ခါမလပ် တရားပြနေသည်သာ ဖြစ်သည်။ တရားကို ခန္ဓာပေါ်မှ လွဲ၍ အခြား၌ ရှာစရာမလိုပါ။ ခန္ဓာသည် တရားဆွေးနွေးရန် အကောင်းဆုံးသော ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်ပါသည်။
အချို့ချို့သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တရားအားထုတ်၍ များမကြာမီ မိမိခန္ဓာအပေါ် တရားမရှာဘဲ အပြင် ဗဟိဒ္ဓသို့ လိုက်တတ်ကြသည်။ ယောဂီတိုင်းသည် မိမိ၏ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ အဇ္ဈတ္တ၌သာ တရားကိုရှာရသည်။ တရားရလိုပါသည် ဆိုပြီးနောက် မိမိ၏ အတွင်း အဇ္ဈတ္တရုပ်နာမ်၌ တရားမရှာဘဲ ပြင်ပရုပ်နာမ်များကို ကြည့်ရှုဝေဖန်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်နေလျှက် လိုရင်းသို့ ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် ယောဂီတိုင်းသည် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရန် အဇ္ဈတ္တရှိ အညစ်အကြေး ကိလေသာများ ခေါင်းပါးစင်ကြယ်စေရန် ရင်တွင်းအကုသိုလ် တရားများကို ဒုက္ခ လက္ခဏာ၊ အနိစ္စ လက္ခဏာ၊ အနတ္တ လက္ခဏာ တို့ဖြင့် ဆင်ခြင်ပွားရှုနေရမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, အနတ္တ, အနိစ္စ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, အနတ္တ, အနိစ္စ. Bookmark the permalink.